फेरि तताएर नखानुहोस् यी खानेकुराहरु
इटहरी । व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौं । तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएपछि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई....
तेलको प्रयोग गर्दा क्यान्सर लाग्ने खतरा
यदि तपाईँले एक पटक प्रयोगमा आएको तेललाई फेरी प्रयोग त गर्दै हुनुहुन्न यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने साबधान ! यसले क्यान्सर, स्ट्रोक, अल्जाइमर जस्ता घातक रोग निम्त्याउछ ।
यसै कारण क्यान्सर, स्ट्रोक र अल्जाइमरजस्ता घातक रोगको शिकार हुने सम्भावना हुन्छ । यसबाहेक एक पटक प्रयोग....
डिप्रेसनको कुरा गरौं
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९४८ मा नै ‘स्वास्थ्य’ लाई ‘स्वास्थ्य भनेको कुनै रोग विहिनताको अवस्था मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा समेत सकुशल रहेको अवस्था हो’ भनी परिभाषित गरेको थियो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, झन्डै आधा शताब्दी भन्दा लामो समयसम्म....
नक्कली अण्डा यसरी चिन्ने !!
नक्कली अण्डा खाएर मानिसहरु बिरामी पर्न थालेका छन् । भारतसँग खुला सीमा भएका कारण नक्कली अण्डाहरु नेपाली बजारमा पनि नभित्रिएला भन्न सकिन्न । यसै कारण हामीले सक्कली र नक्कली अण्डा चिनिराख्नु आवश्यक छ ।
झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले हेरेकै भरमा कुन सक्कली अण्डा र....
चायाँमुक्त अनुहारका लागि ध्यान दिनु पर्ने कुरा
अनुहार सफा हुनु भनेको स्वस्थ हुनुको हो । तर अनुहारमा चायाँ आयो भन्दैमा शरीर अस्वस्थ हुन्छ भन्ने होइन । शरीर अस्वस्थ छ भन्ने संकेत अनुहारमा चायाँ देखिनु पनि हो ।
चायाँ पोतो आउने धेरै कारण हुन्छ । पहिलो कारण भनेको घामको असर हो ।....
फ्रिजको पानी पिउँदा हुने ५ बेफाइदा
गर्मीमा मानिसहरु चिसो पानी खान रुचाउँछन् । त्यसैले मानिसहरु फ्रिजमा राखिएको पानी पिउन मन पराउँछन् ।
तर, तपाईलाई के थाहा ? फ्रिजको पानी पिउनाले हाम्रो स्वास्थमा विभिन्न असर देखा पर्छन् ।
१. कृत्रिम तरिकाले सामान्य भन्दा अत्याधिक कम तापक्रमको पानी हानिकारक हुन्छ ।
जिरा पानी खाँदा के हुन्छ ?
काठमाडौं । हामी जिरालाई भान्सामा प्रयोग गरिने मसलाको रुपमा लिन्छौं तर यसलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रो शरिरलाई फाइदा पनि गराउँछ । जिरालाई पानीमा उमालेर खान सकेको खण्डमा शरिर स्फूर्त रहन्छ ।
जिरा पानीले एसिडबाट हुने असरलाई कम गर्छ ।....
खरबुजामा विष हुनसक्छ
शीतलता प्रदान गर्ने हुँदा गर्मीमा निकै रुचाइने फल हो, खरबुजा । शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित राख्न मात्र होइन, धेरै फाइदा गर्ने यो फल । कतिपय दीर्घ रोगमा समेत लाभदायक मानिन्छ ।
तर, स्वास्थ्यका लागि खाइने फलले कतै त्यही स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याइरहेको बारे सतर्क हुनुपर्छ....
गर्मीमा झिंगा, साङ्ला र लामखुट्टे कसरी भगाउने ?
गर्मी बढेसँगै तपाईको भान्छामा साङ्ला सलबलाउन थाले होलान् । राती लामखुट्टेको आवाज र टोकाइले निन्द्रा बिथोल्न थाल्यो होला । फोहोर-मैलाबाट आएको झिंगाले सताइरहेका होलान् । यि समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
साङ्लो भगाउने बिधी
साङ्ला गर्मीमा एकदमै छिटो फैलन्छ । यसको सन्तान पैदा गर्ने क्षमता....
समर टिप्सः कस्तो पहिरन लगाउने ?
दिनहुँ तापमान बढ्दैछ । जति गर्मी बढ्यो, उत्तिनै आफ्नो लुगा बोझिलो लाग्छ । पसिना र धूलो धुँवाले शरीरमा गन्ध आउन थाल्छ । यावत् समस्याबाट कसरी पार पाउने ? कस्तो पहिरन लगाउने ? कसरी कुल देखिने ? केही टिप्स उपयोगी हुनसक्छ :
यो बसन्त ऋतुको मौसम....
छ माया छपक्कै युट्युबमा (भिडियो)